कोमल ओलीलाई प्रश्न : दशैंको राम्रो–नराम्रो पक्ष के–के हो ?
घरमै परिवारसँग बसेर दशैं मनाउँदै छु । पहिलेजस्तो रमाइलो त नहोला तर, समय यस्तै छ ।
यो पटक दशैंमा मिस भएको कुरा के हो ?
यसपटक मिस गरेको शुभकामना आदानप्रदानका समारोहहरू, साथीहरूसँगको भेटघाट र उनीहरूसँगका रमाइला कुराकानीहरू । टीका थाप्न जाने कार्यक्रमहरू, मेरो पार्टीको विशाल शुभकामना आदानप्रदान समारोह, यस्तै कुराहरू हुन् ।
जिन्दगीको सबैभन्दा सम्झनलायक दशैं कुन होला ?
बाल्यकालको दशैं नै हो । हरेक दशैं मा नयाँ लुगा किन्नु र त्यो कपडा लगाएर गाउँभरि घुम्नु, अनि टीका थापेर पाएको पैसा पटक–पटक गन्नु र पैसाअनुसार के चिज किन्ने भनेर योजना बनाउनु लगायतका यादहरूका कारण मेरा लागि ती दशैंहरू आजपनि ताजा छन् । र, मानसपटलमा घुमिरहन्छन् ।
धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यसका धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष र सामाजिक पक्ष । यी तीनै पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक जे भनेपनि हाम्रा मान्यजनबाट टीका ग्रहण गरेर प्राप्त गर्ने आशिर्वाद नै हो । यसले सम्बन्धमा सद्भाव, मानव हृदयमा सहिष्णुता, मानिसमा अनुशासन निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ ।
पहिले–पहिले सपिङ गर्थें अब त गर्दिनँ । पहिलेकै जे छ त्यही लगाउँछु, सामान्य खानेकुरा खान्छु । म दशैंभर माछामासु खाँदिन त्यसैले अब त सबैकुराहरू छुटेका छन् । कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई केही किनिदिन्छु । भाइबहिनीहरूलाई, मामुबुवालाई किनिदिन्छु । उपहार किनिदिन्छु । त्यति नै हो ।
दशैंका राम्रा पक्ष नै धेरै छन् । नराम्रा पक्ष खासै देख्दिनँ । पहिले हुने खानेलाई दशैं नहुनेहरूलाई दशा भनिन्थ्यो तर, आजभोलि मानिसहरूले बुझे, अब खासै त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले समाजवादउन्मुख अर्थनीति लिएको छ । संविधानमै किटान गरिएको छ भने अब सबैले बराबर रूपमा दशैं मनाउने समय आउँदैछ । अब देखासिकी गरेर दशैं मनाउने अवस्था पनि छैन । मानिसले बुझेका छन् । मलाई अलिकति बलिपूजामा चित्त भारी हुन्छ । तर, चलिआएको प्रथालाई एकैपटक रोक्न पनि नसक्ने अवस्था छ । जब मानिसले बुझ्नेछन्, शायद त्यसपछि यसमा परिवर्तन आउन सक्ला । यही हो ।
समयानुसार दशैं मनाउने तरिका फरक होलान् । तर, धार्मिक र केही सामाजिक मूल्यमान्यता उही रहन्छन् र रहनुपर्छ । बाजेले नातिलाई नै हो टीका लगाइदिने नातिले बाजेलाई लगाइदिने दिन त नआउला । दशैंमा देवीकै पूजा आराधना गरिन्छ । त्यसैले खासै परिवर्तन नहोला । त्यही जुवातास खेल्नेचाहिँ परिवर्तन हुन सक्ला ।
दशैंमा अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा खानाका परिकारहरू नै हुन् । विशेष गरेर मासु त्यसमा पनि खसीको पक्कु, पहिले बनाएर लगातार खाइराख्ने । स्वास्थ्य राम्रो भए त खाँदा फरक पर्दैन । दशैं हो दुईचार दिन मज्जाले खान्छु भनेपनि फरक पर्दैन । आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर खाने हो । खाएर फेरि परिवारलाई नै दुःख भएमा मज्जा आउँदैन । त्यसैले खानुस्, तर आफ्नो अवस्था हेरेर । अहिले त झन् कोरोना छ खानामा विषेश ध्यानदिनुर्‍यो । बिरामी भएपछि अस्पताल जानुपर्छ । दुःख हुन्छ आफूलाई, परिवारलाई साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई । त्यसैले यसपटक त झनै विशेष ध्यान दिनुपर्छ हामी सबैले खानपानमा ।
सानोमा पैसाको नै विशेष महत्त्व हुन्थ्यो । एकपटक मेरो हजुरबुवाले मलाई लुकाएर पैसा थप दिनुभएको थियो । त्यसपछि हजुरबुवा मलाई असाध्यै राम्रो लाग्न थाल्यो । जसले पैसा दिन्छ त्यो राम्रो लाग्ने त्यो बेलाको स्वभाव थियो । सानो छँदाका धेरै सम्झना छन् ।
दशैंका बेला सधैँ सम्झनामा आउने एउटा याद के हो ?
सानोमा गाउँमै हुँदा हामी खुबै पिङ खेल्थ्यौं । एकपटक पिङ खेल्दा धेरै माथिबाट चिप्लिएर डोरीमा झुन्डिए बचेँ । खस्न त खसिनँ । खसेको भए शायद ढाड पक्का भाँचिन्थ्यो । त्यसपछि खासै मच्चिएर पिङ खेल्दिनँ ।
आर्यन पक्राउपछि शाहरुखका फ्यानले गरे चिन्ता, भने- ह...
पशुपतिनाथमा पूजा गर्दै अनुपम खेरले गरे यस्तो प्रार्...
शर्लिनले राज र शिल्पाविरुद्ध दर्ता गरिन् उजुरी, यस्त...